यी १० लक्षण देखिएमा कहिले पनि वेवास्ता नगर्नुहोस् क्यान्सर लागेको हुन सक्छ ! जानी राखौ
क्यान्सर रोग आफैमा ठुलो एकै चोटी हुने खतरनाक रोग भने होइन । तर मानिसले क्यान्सर भन्नासाथ भयावह र त्राशदीपूर्ण रोग भन्ने बुझ्ने गरेका छन् । यसलाई अर्को शव्दमा अर्बुद रोग पनि भन्ने गरिन्छ । मानव शरीरका विभिन्न भागहरुमा लाग्ने क्यान्सरहरु मध्ये ठूलो आन्द्राको क्यान्सर अग्रपङ्तिमा पर्ने क्यान्सर हो ।
क्यान्सर एकै चोटी लाग्ने रोग होइन सानो सानो कुराहरु ख्याल गरिएन भने यसले ठुलो भयावह लिई क्यान्सर निम्तिन सक्छ । क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् ।
१. निरन्तर खोकी (फोक्सोको क्यान्सर)
फोक्सोको क्यान्सर धेरै नै नफैलिए सम्म अधिकाँश मानिसले चाल पाउँदैनन् । कतिपय मानिसमा भने फोक्सोको क्यान्सरका लक्षण शुरुमै देखिन्छन् । फोक्सोको क्यान्सरलाई सामान्य रुपमा साना कोषबाट हुने क्यान्सर र साना कोषबाट नहुने क्यान्सर गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। साना कोषबाट नहुने क्यान्सर बढी फैलिएको पाइन्छ जसलाई एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा र लार्ज सेल कार्सिनोमा गरी तीन उपवर्गमा विभाजन गरिएको छ।
फोक्सोको क्यान्सरका लक्षणहरु यस प्रकार छन्:
लामो समय देखि निरन्तर र स्थाई रुपमा खोकी रहनु
सास फेर्दा असजीलो हुनु वा खर्खराहट हुनु
खोक्दा खकारमा रगत देखिनु
छाती दुख्नु : बोधो, कडा र घोचे जस्तो
आवाजमा धोद्रोपन आउनु
बिनाकारण थकान महशुष हुनु
तौल अस्वभाविक रुपमा घट्दै जानु र तौलमा कमी आउनु
औंलाका टुप्पाहरु सुन्निएजस्ता भएर कडा हुनु
२. शरीरमा भएका मुसाको रंगमा परिवर्तन (स्किन क्यान्सर)
मेलानोमा स्किन क्यान्सर मध्ये सबैभन्दा घातक क्यान्सर मानिन्छ । यो शरीरको कुनै पनि भागमा देखिन सक्छ । तर अधिकाँशलाई खुट्टाको पछाडी, पाखुरा वा अुहाारमा देखिन्छ । कतिपयलाई नङको भित्र समेत देखिन सक्छ ।यो क्यान्सरको शुरुवातमा शरीरमा रहेका मुसाको रंग फेरिन्छ । मुसा ठूलो हुने, आकार बदलिने, रंग बदलिँदै जाने यस्ता संकेत हुन् । दुख्ने र चिलाउने समेत हुन सक्छ ।
३. दिसामा रगत, दुखाइ (आन्द्राको क्यान्सर)
आन्द्राको क्यान्सर भएमा दिशामा रगत देखिने, नाइटोमुनिको भाग दुख्ने, तौल कम हुँदै जाने, खाना खान मन नलाग्ने, छिट्टै थकान महसुस हुने, दिशा ठीक नहुनु (कहिले पखाला लाग्ने कहिले कब्जीयत हुने) जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् ।
आन्द्राको क्यान्सर भएको थाहा पाउन यसका विभिन्न लक्षणहरुको अध्ययनसँगै र जाँचहरु गर्नुपर्दछ । यो रोगमा शरीरमा रगत कम हुन्छ, मलद्धारको जाँच गरेर पनि यसबारे थाहा पाउन सकिन्छ । दिशाको जाँच, सिग्म्वा इण्डोस्कोपी (बायाँ तर्फको) गरेर । कालोनेस्कोपी गरेर (पुरै ठूलो आन्द्रा हेरेर) पनि यस रोगबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । अन्य परीक्षणमा ब्यारियम इनेमा, भर्चुअल कोलोनोस्कोपी गरेर पनि ठूलो आन्द्राको क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
४.पिसावमा रगत (प्रोष्टेट क्यान्सर)
प्रोस्टेट क्यान्सरका एकतिहाइ बिरामी ६५ वर्ष नाघेका पुरुष हुने गरेका छन् । प्रोस्टेट क्यान्सरलाई ‘साइलेन्ट किलर’समेत भनिन्छ । यो क्यान्सर पुरुषको प्रोस्टेट ग्रन्थीमा हुन्छ । प्रोस्टेट यस्तो ग्रन्थी हो, जसले वीर्य उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ ।
प्रोस्टेट क्यान्सरका लक्षणहरु यस प्रकार छन्:
पिसाब गर्दा पीडा हुनु
पिसाब गरिरहेका वेला जलन हुनु
लिंग र स्खलनमा समस्या हुनु
५.मुख भित्र सन्चो नहुने घाउ (धेरै प्रकारका क्यान्सर)
६. रहस्यमयरुपमा वजन घट्नु (धेरै प्रकारका क्यान्सर)
अधिकाँश क्यान्सरको साझा लक्षण मानिन्छ वजन घट्नु । यदि तपाइँको शरीरमा रहस्यमयरुपमा वजन घटिरहेको छ भने यो विभिन्न क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार वजन घट्नुको कारण खुल्न सकेन भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
७. निल्न समस्या (खाना नलिको क्यान्सर)
खाना निल्न समस्या भैरहेको छ भने सचेत हुनुस् । यो तपाइँको खाना नलीमा क्यान्सर भएको संकेत हुन सक्छ ।नियमितरुपमा खाना निल्न समस्या हुन थाल्यो भने चिकित्सककोमा गइहाल्नुस् । वजन घट्नु पनि यो क्यान्सरको अर्को लक्षण हो ।
८. अनावश्यक टुडुल्को उठ्नु
९. रहस्यमय दुखाइ (धेरै प्रकारका क्यान्सर)
१०. दिसारपिसावमा रगत (गुदद्वार क्यान्सर)
कस्तो अनौठो शर्त : यी जोडीको विवाहमा जान गणितको परिक्षा पास गर्नुपर्ने !
बिना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाउने श्रीमानलाई ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत श्रीमतीले चकलेट र गुलाबको फुल दिएपछि …! (भिडियोसहित)